Ny Apple Watch Series 6 oximeter dia mandaitra tahaka ny dokam-barotra araka ny fanadihadiana | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 26/09/2021 19:00 | Apple Watch, About us
La fahasalamana nanjary axis cross-fanapahana hiara-miasa amin'ny fitaovana finday. Fantatr'i Apple izany ary nandritra ny taona maro dia nampidirina fitaovana sy teknolojia sasany hanaraha-maso ny fahasalaman'ny mpampiasa amin'ny fitaovany. Ohatra iray amin'izany ny fampidirana rafitra iray hanatanterahana electrocardiograms ao amin'ny Apple Watch Series 5. Tamin'ny taon-dasa, niaraka tamin'ny Apple Watch Series 6, dia natolotra oximeter hahafahana mandrefy ny saturation oksizenina ao anaty ra. Ny fanadihadiana iray dia nanambara izany Ny fahombiazan'ity fandrefesana ity amin'ny famantaranandron'i Apple dia mifamatotra mafy amin'ny fandrefesana avy amin'ny oximeter ara-barotra.
Ny fanadihadiana iray dia manambara ny fahombiazan'ny Apple Watch Series 6 oximeter
Ny haavon'ny oxygen oxygen (na ny saturation) dia famantarana lehibe iray amin'ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny. Manampy anao hahatakatra raha mifoka oksizena ilaina sy ny fomba fizarana azy ny vatanao. Ny Apple Watch Series 6 dia misy fampiharana sy sensor tena manavao, izay afaka mandrefy ny fatran'ny oxygen anao amin'ny fotoana rehetra. Ity fiambenana ity dia mitandrina amin'ny fampisehoana tsara na andro na alina.1
Navoaka tao amin'ny gazety malaza Nature Ny 23 septambra. Ity dia lahatsoratra navoaka miaraka amin'ny anarana: «Fampitahana ny sanda momba ny SpO2 sy ny tahan'ny fo amin'ny Apple Watch sy ny oximeter ara-barotra mahazatra amin'ny marary miaraka amin'ny aretina pulmonary ».
Ny fanandramana dia nahitana marary 100 niaraka tamin'ny aretina pulmonary obstructive maharitra (COPD) na aretin'ny havokavoka interstitial (ILD). Ireo aretina amin'ny rafi-pisefoana ireo dia mila a fanaraha-maso ny saturation oxygen oxygen satria ny ambaratonga avo sy ambany dia manimba ny fifehezana ny patolojia. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ireo marary ireo hanana oximeter ara-barotra ao an-trano.
Nanandrana nanamarina ny fandinihana ny fahombiazan'ny Apple Watch Series 6 oximeter sy ny tahan'ny maso amin'ny fandraisana an'io sanda io mampifandray azy amin'ny soatoavina azo amin'ny saturation mahazatra sy metatra pulse. Farany, ny valiny dia nampiseho fa ny fandrefesan'ny famantaranandro dia nitovy tamin'ny fandrefesan'ny sensor roa, namarana izao manaraka izao:
Ny valinay dia manondro fa ny Apple Watch 6 dia fomba azo itokisana hahazoana tahan'ny fo sy SpO2 amin'ireo marary voan'ny havokavoka ao anatin'ny fepetra voafehy. Ny fivoaran'ny teknolojia smartwatch dia mitohy mihatsara ary ny fanadihadiana dia tsy maintsy atao mba hanombanana ny marina sy azo itokisana amin'ny karazana aretina isan-karazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch Series 6 oximeter dia mandaitra toy ny dokam-barotra araka ny fanadihadiana iray
Tsy miasa intsony ny ID ID raha soloinao amin'ny efijery tsy izy ilay efijery iPhone 13